Hubi saldhig macaamiisha ah tii pachinko ah
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Hubi saldhig macaamiisha ah tii pachinko ah
In pachinko tii jira noocyo kala duwan oo macaamiisha ayaa soo gaaray dukaanka. Ma jiraa qof kuwaas oo mararka qaarkood u tago inuu u ciyaaro, laakiin waxaan qabaa in aanay wax badan aad daryeesho saldhig macaamiisha, in qowladda pachinko ah, inta badan dumarka dukaamada iyo shaqaalaha xafiiska inta badan dukaamada, ama, ragga dhallinyarada ah sida dukaamada, kuwaas oo lagu xisaabiyo inta badan , waxa ay sidoo kale kala duwan salka macaamiisha by dukaamada.
qowladda pachinko in qof ka socda waa, nooca dukaamo taasi, si loo ogaado in fursad yahay waxaa ka mid ah, iyo sii eegno salka macaamiisha ah, waxaa la yaab leh oo ku guuleystay macquul waa heer sare ah.
aad u malaynayso in laga yaabo in waxa la arko ee salka macaamiisha ah, laakiin ay dhacdo in haddii madal la doortay bogsaday block, Iyada oo ku xidhan saldhiga macaamiisha ah, waxaa sidoo kale waa dib cabatay weyn u dhaqaaqo miiska. In dukaamada saldhigga macaamiisha kasta waa in indhaha ujeedada, ka dibna si faahfaahsan sharaxaad aad.
waxaan sidoo kale, laakiin waxaan u maleynayaa in uu jiro maqlay pachislot ereyga, waxa ay dadka reer Pachipuro ah, waa at jaleecada hore, laakiin aan u hoggaansamaan waa adag tahay in la ogaado. Sida yihiin falalka badan qofka kaas oo la sheegay in ay Pachipuro iyo semi-xirfadeed, waxaa jira jeeg ee xogta bean yar. Sidoo kale maalintii aan si cad u ciyaaro, waxay leeyihiin taleefanka gacanta ama buugayga, waxaa daba noqonayaa in ay eegaan xogta.
dhaqanka this, halkii butukha ah, iyadoo talaabo ka badan Afyare, sanadihii ugu dambeeyey, waa sida macaamiisha dhallinyarada lab xitaa haddii aan xirfad ah, waxaad sidoo kale waxaa la sameyn karaa si ay u falanqeeyaan xogta on adiga kuu gaar ah. Isagoo ka hadlayay pachinko
, stop garaaca, iwm, dadka caadiga ah ee macaamiisha si ay u dhaqdhaqaaqa gacanta ka yara duwan, waxaa suuro gal ah ee Pachipuro. In, tii pachinko waxaa jira Pachipuro waa, oo waxaad ku tidhaahdaa haddii tii pachinko baxay, anigu ma aan aslanba dhihi ha noqon kiiska. Pachipuro yahay, si ay u falanqeeyaan xogta ee dukaanka maalin-ka-maalin, waxaad u timid inaad ku dhacay aragti caado dukaamo.
ujeedadoodu tahay guddiga buluug-chip oo la dhibic pin a, waa in ay soo booqdaan. Dhab ahaantii
Pachipuro in joogo waa, ku guuleysan badan tahay in ay u istaagaan, laakiin waa in uu jiro, ee pin-dhibcood oo ka mid ah daraasiin unugyada, sida waa in aan ujeedadoodu tahay, dukaamo miiska wanaagsan waa yar yahay, si fudud ku guuleysan in hiwaayadda ah Fadlan qabaa wax adag .
Pachipuro wax in aysan ahayn mid ku guuleystay siman fududahay in dukaanka. Pachipuro, sababta oo ah waa tarjumaadda si ay u noolaadaan at pachinko dakhliga, xataa socday wax la mid ah, 's sheekada aan macquul aheyn in hiwaayadda. Professional badan ujeedadoodu dukaamada jiraan, oo ujeedadoodu tahay dukaanka kala duwan macaamiisheeda ururin, waa macquul inay ku guuleystaan ??oo cagsi ah waa heer sare ah.
dukaamada saldhigga macaamiisha kasta waa, ku hadla ee wanaagsan aad Miseka, iyo macaamiisha in ay yihiin ciyaaro si aan ogahay pachinko badan, sida dadka waqti ku koobnayn, iyo waxaa jira noocyo kala duwan oo dadka, free taagan oo tayo sare leh ee ka soo horjeeda Waxa ay noqon doontaa fudud. Xaqiiqada ah in macaamiisha ah ee kala duwan oo aan la koobi karayn sida waa ururin waa in ay jiraan waa wax macquul ah in uu jiro ah ayaa sidoo kale hannaanka miiska u fiican.
qof kasta oo aan tago hal mar oo keliya in muddo ah, waxaa laga yaabaa in si gaar ah ay wanaagsan tahay marka aad dooranayso dukaan si aad u aragto saldhig macaamiisha. Isagoo ka hadlayay of pachinko, taagan oo keliya in Dadka u muuqdaan in ay tagaan indhaha si ay u doortaan, by logu hareeraha si fiican, isku day koox dagaal dheeraad ah xariif ah.